Sida farriin loogu diro WhatsApp adiga oo aan ku darin lambarka xiriirada | Androidsis
Ignacio Sala | 20/05/2021 18:00 | Tababarada, Whatsapp
Jeclaaw ama ha jeclaan, fariimaha WhatsApp waxay noqdeen habka isgaarsiinta ugu isticmaalka badan adduunka, kana sarreeyaan xitaa wicitaanada taleefanka iyo yareynta isdhexgalka bulshada ee dad badan, kaasoo mustaqbalka fog, abuuri kara dhibaatooyinka wada xiriirka nolosha dhabta ah sida lagu sheegay daraasado kala duwan.
Mid ka mid ah shaqooyinka ay WhatsApp noo diyaariso, iyo in badan oo isticmaaleyaashu aysan ka warqabin, waa suurtagalnimada in la diro farriin WhatsApp ah iyada oo aan lagu darin lambar taleefan ajandaheena. Sidan oo kale, waan iska ilaalin doonnaa buuxi liiskayaga xiriirka tirada aan mar kaliya adeegsaneyno (xaaladaha badankood).
Laakiin marka lagu daro, sidoo kale waa hab aad u fiican in ilaali asturnaantayada. Inta badan isticmaaleyaasha, waxaan u qaabeynaa arjiga si kaliya xiriirada aan ku keydinay ajendaha, ay u heli karaan xogteena sida taariikhda xiriirkii ugu dambeeyay, sawirada astaamaha iyo qoraalka aan ku muujineyno qeybta Xaaladda , iyo kuwo kale.
Sabab kasta ha noqotee, haddii aad rabto inaad ogaato sida dir farriin WhatsApp ah adigoon keydin lambarka taleefanka ajandaha aaladdaada moobaylka, waa kuwan tallaabooyinka la raacayo:
1 Iyadoo loo marayo WhatsApp API
2 Iyadoo la adeegsanayo codsiyo dhinac saddexaad ah
2.1 Fariin fudud
2.2 Waa maxayDirect
2.3 Wsp adigoon kudarin xiriiro
3 Ka socda kombiyuutar
Iyadoo loo marayo WhatsApp API
Ha walwelin, waad sii wadan kartaa aqrinta adiga oo aan wax dhibaato ah qabin inkasta oo aadan aqoon waxa API yahay, sida ay u shaqeyso iyo waxa loogu talagalay. WhatsApp, sida codsiyo kale oo badan, waxay u diyaarineysaa horumariyeyaasha iyo isticmaaleyaasha walxaha u oggolaanaya inay ficillada sameeyaan.
Si aad u isticmaasho WhatsApp API si aad u dirto farriimaha adiga oo aan ku darin lambar taleefan waxay u baahan tahay xoogaa dadaal in, markii aan la qabsanno, waxaan si toos ah u sameynaa si otomaatig ah. Waxay tagaysaa iyada oo aan la sheegin in barnaamijka WhatsApp ay tahay in lagu rakibo qalabka (in kasta oo ay u muuqan karto wax iska cad, haddana adeegsadayaal badani sidaa uma malaynayaan).
Tallaabada ugu horreysa ee ay tahay inaan sameyno waa marin u hel biraawsarkayaga oo gal URL-ka soo socda ee kuyaala bar-tilmaameedka
Halka ay ku qoran tahay lambarka taleefanka waa inaan geli lambarka taleefanka taas oo aan dooneyno inaan u dirno fariinta WhatsApp, oo ay ku jiraan lambarka waddanka laakiin aan lahayn calaamadda +.
Tusaale ahaanHaddii aan rabno inaan u dirno farriin WhatsApp lambarka taleefanka ee Mareykanka oo horgalaha caalamiga ah uu yahay 1 iyo lambarka (555) 555 5555, waxaan qori doonnaa:
Cinwaankan shabakadda wuxuu furi doonaa dariishad leh midabada WhatsApp iyo halka ay tahay inaan riixno Fariinta. Marka xigta, WhatsApp wuxuu ku furi doonaa lambarka taleefanka ee qaataha halka aan kaliya ku qori karno farriinta.
Si looga fogaado inaan qoro cinwaankaas mar kasta oo aan dooneyno farriin ugu dir lambarka taleefanka taas oo aan ku kaydsanayn ajandaheena, waa inaan ku kaydinnaa Bookmarks-ka biraawsarkayaga.
Marka xigta ee aan rabno inaan isla qalliinka sameyno, waa inaan sameyno wax ka beddel url adiga oo beddelaya lambarka taleefanka lambarka taleefanka waxaan rabnaa inaan kula xiriirno WhatsApp adigoon keydin lambarka taleefanka ajandaheena.
Iyadoo la adeegsanayo codsiyo dhinac saddexaad ah
Ahaanshaha API guud oo qof kastaa isticmaali karo, inbadan ayaa ah kuwa horumariya ka faa'iideyso shaqadan si aan u bilowno codsiyo ka socda Play Store oo noo ogolaanaya inaan ku fulino howshan qaab aad ufudud, dhaqso badan oo raaxo leh adeegsadaha.
Iyadoo lagu xisaabtamayo inay ka faa’iideysanayaan WhatsApp API, taas oo ah waa mid caam ah oo bilaash ah, waxa ugu horeeya ee ay tahay inaan sameyno waa inaan iska tuurnaa dhammaan codsiyadaas la bixiyay, maaddaama codsiyada bilaashka ah ee xayeysiiska ah ay na siin doonaan isla shaqeynta iyadoon la bixin hal euro.
Fariinta fudud waa codsi noo ogolaanaya inaan fariimaha WhatsApp ugu dirno lambar taleefan oo aanan ku keydin liistada xiriirkeena sidoo kale, Kuma jiraan nooc kasta oo xayeysiin ah, sidaas darteed waa mid ka mid ah xulashooyinka ugu fiican ee la tixgelin karo.
Markaanu furno arjiga, waa inaan fureynaa dhaji ama qor lambarka taleefanka taas oo aan dooneyno inaan u dirno fariinta oo aan gujino batoonka Ku bilow wadahadalka WhatsApp. Si otomatig ah, WhatsApp wuxuu ku furi doonaa lambarka taleefanka ee aan soo tilmaannay si loo bilaabo wadahadal.
Developer: Xiriirada Fariimaha Apps
WhatsDirecto waa codsi kale oo laga heli karo Play Store kaasoo noo ogolaanaya inaan u dirno fariimo WhatsApp ah adigoon keydin lambarka taleefanka ee buuga xiriirka, kaas oo kuma jiraan xayeysiinta.
Markaanu koobiyaynay ama aan galnay lambarka taleefanka ee arjiga oo aan lahayn horgalaha waddanka, dhagsii sanduuqa hoos-u-dhaca ah ee lagu muujiyay lambarka hortiisa oo xulo waddanka uu ku yaal lambarka taleefanka oo guji Wadahadal bilow.
WhatsDirecto - La hadal adigoon keydin lambarka
Developer: Horumarinta Waalida tk
Wsp adigoon kudarin xiriiro
Ikhtiyaar kale oo xiiso leh oo lagu xisaabtamo marka farriimaha WhatsApp loo diro lambar taleefan oo aanan ku keydin ajandaheena waa Wsp iyada oo aan lagu darin xiriirrada, barnaamij bilaash ah oo xayeysiis kujira.
Si ka duwan barnaamijyada kale, looma baahna in la galo horgalaha waddanka ku xiga lambarka taleefanka, waa inaan ka xulanno waddanka loo soconayo sanduuqa hoos-u-dhaca ee lagu muujiyay isla sanduuqa hortiisa halka aan ku dhajino ama ku qorno lambarka taleefanka.
Wsp Adigoon kudarineynin Xiriirada - Guji si aad ulahadasho
Shirkado aad u tiro badan ayaa bilaabay inay qaataan WhatsApp Business oo ah hab isgaarsiineed oo ka dhexeeya macaamiishooda. Ka fulinta hawshan taleefanka gacanta casriga ahi maaha mid raaxo iyo deg deg ah midna, gaar ahaan marka tirada wada hadalka la abuurayo ay aad u badan tahay.
Nasiib wanaagse, API-kan 'API' wuxuu kaloo la shaqeeyaa biraawsar kumbuyuutar kasta, illaa iyo inta uu yahay isla biraawsarka aan u isticmaalno adeegsiga WhatsApp Web. Qaabka loo raaco waa isku mid, gal cinwaanka aan ku tilmaamay qaybta hore.
Markaad riixeyso furaha gala, biraawsarku wuxuu ogaan doonaa inaanaan haysan dalabka la rakibay wuxuuna nagu casuumi doonaa inaan isticmaalno WhatsApp Web. Markaad gujineysid WhatsApp Web, nooca shabakadda WhatsApp wuxuu si otomaatig ah ugu furmayaa lambarka taleefanka ee aan ku galnay URL-ka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Sida farriin loogu diro WhatsApp adiga oo aan ku darin lambarka xiriirada
HAYLOU LS05S, dib u eegis, qiimaha iyo faa'iidooyinka